April 2015 ~ Myanmar Online News
စိုင်းခမ်းမိုင်းနှင့် ၀ တွေရဲ့ အကြောင်း တစေ့တစောင်း
12:03 AM ပြည်တွင်းသတင်း, အင်တာဗျူး No comments
ဆရာ စိုင်းခမ်းမိုင်း (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းဇော် / ဧရာဝတီ)
ဆရာ စိုင်းခမ်းမိုင်းကို ရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းပွန်မြို့တွင် မွေးဖွားသည်။ ၁၉၆၁ တွင် မြစ်ကြီးနားရှိ Kachin Baptist School မှ ၁၀ တန်းအောင်မြင်ပြီး တောင်ကြီး ဥပစာကောလိပ်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်တို့ တွင် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှ သမိုင်းအထူးပြုဖြင့် မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၈၃ ခုနှစ်အထိ မန္တလေး တက္ကသိုလ်၊ မိတ္ထီလာ ကောလိပ်တို့တွင် နည်းပြ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ လက်ထောက် ကထိက အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန် အဆင့်ဆင့် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုပြု ပြင်လို့မရတောင် အိုက်တင်ပိုင်းကို ပရိသတ်ပြောစရာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားမဲ့ခင်ဝင့်ဝါ
10:51 PM အနုပညာ No comments
ပရိသတ်တွေ ဝေဖန်ကြတဲ့ အသံပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြင်ဆင်ပါ့မယ်ဆိုတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါက အသံမပြောင်းလဲရင်တောင် သရုပ်ဆောင်ရမဲ့ကာရိုက်တာအိုက်တင်ပိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရပါ့မယ်လို့ ခုလို ဆိုပါတယ်။ "ညီမ အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးပြင်ဆင်ပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ အသံကလဲ မွေးကတည်းက ဒီအသံပဲဆိုတော့ အိုက်တင်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ပိုကြိုးစားပြီးပြင်ဆင်ဖြစ်ပါမယ်။" တဲ့။
အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှလွဲ၍ ကျန်ပါတီဝင်များအား သမ္မတရာထူး ရွေးချယ်ထားခြင်းမရှိ
NLD ပါတီတွင် ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်မှလွဲ၍ ကျန်ပါတီဝင်များအား သမ္မတရာထူးကိုရွေးချယ်ထားခြင်းမရှိဟု ပါ တီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တစ်ဦးက ရန်ကုန် တိုင်းမ်ဂျာနယ်သို့ ပြောသည်။
မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ဖယ်ရှားမယ့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဓား
photo - bangkok post.com
ထိုင်းနိုင်ငံ နခွန်ဆ၀မ်ခရိုင်ရှိ ဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်းတခုမှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဓားကြီးတခုကို ပြုလုပ် ထားရှိခဲ့ပါတယ်။
အရှည် ၉ မီတာ အကျယ် ၈၃ စင်တင်မီတာ ရှိကာ အလေးချိန် ၃ တန်ကျော်ရှိတဲ့ အဲ့ဒီဓားကြီးကို ထိုင်းဘတ်ငွေ ၃ သိန်း အကုန်အကျခံပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။
ကျောက်ဖြူ ရေနက်စီမံကိန်းမှ လုပ်ငန်းခွင်တခု၏ မြင်ကွင်း
အဆိုတော်ပိုပိုက ၎င်း၏ ဒုတိယတစ်ကိုယ်တော်အခွေကို ‘အလွမ်းသီချင်းကြိုက်တဲ့ ရေဒီယို’ ဟု အမည်ပေးထားပြီး မေလအ တွင်း ကျရောက်မည့် (၂၅)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တွင် ဖြန့်ချိပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပိုပိုကပြောသည်။‘‘ပိုပိုက အလွမ်းသီချင်းကြိုက် တယ်။ ပိုပို သာ ရေဒီယိုတစ်လုံး ဆိုရင် အလွမ်းသီချင်းတွေကို ပိုပြီးဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ညွှန်းပြီး ဒီနာ မည်လေးကို ပေးဖြစ်တာပါ’’ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကွတ်ခိုင်-မူဆယ်လမ်း ပိုင်းကို ပိတ်ဆို့ကာ တအာင်န်း (ပလောင်) အမျိုးသား လွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် (TNLA) က ဆက်ကြေးငွေကောက်ခံနေ ခြင်းကြောင့် အစိုးရတပ်မတော် က တားဆီးခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲအပြင်းအ ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ တပ်မတော်မှ တပ်ကြပ်တစ်ဦးကျဆုံးပြီး အရာ ရှိတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
7:36 PM ပြည်တွင်းသတင်း, ဆောင်းပါး No comments
11:07 PM အင်တာဗျူး, အနုပညာ No comments
Rapper ထက်ထက် (Bobby Soxer) (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်ကျော်လောက်က Hip Hop Show စင်မြင့်တွေထက်မှာ Rap စာသားတွေကို အမြန်ဆုံး ရွတ် ဆိုပြနိုင်လို့ ပရိသတ်တွေ သဘောကျခဲ့တဲ့ အသက်ငယ်ငယ် Rapper မိန်းကလေး တယောက်ကို ပရိသတ် တွေ စပြီး သတိပြုမိခဲ့ ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ Rapping ရွတ်ဆိုမှု တွေကို ပရိသတ်တွေ လက်ခံ သဘောကျလာပြီး ဂီတ လောကထဲ သူ့ရဲ့ နာမည်တခုကို အခိုင်အမာ ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။
နွေရာသီကို ဘယ်လို အန်တုကြမလဲ- နေခြည် (ဆေး-၁)
9:16 PM ကျန်းမာရေး No comments
လဟာ မြန်မာပြည်သူ၊ ပြည်သား တွေ ပျော်ရွှင်ရတဲ့လတစ်လလို့ ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပိတောက်ပန်း တွေဝေဆာနေသလို အတာပွဲတော်နဲ့လည်း တစ်နှစ်တစ် ခါတိုက်ဆိုင်တဲ့လတစ်လဖြစ်လေတော့ အများသူငါပျော် ရွှင်ကြရတဲ့ လလေးတစ်လပါ။
မြန်မာနှင့် ယှဉ်ရမည့် အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံ ဘောလုံး အသင်းများ
1:18 AM အားကစား No comments
နေပြည်တော် ဆီးဂိမ်းတွင် မြန်မာနှင့် ထိုင်းဘောလုံး အသင်းတို့ ယဉ်ပြိုင်ကစားစဉ် (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းဇော် / ဧရာဝတီ)
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပွဲ၊ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများကို လာမည့် မေလထဲ တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ရာ စင်ကာပူ ဆီးဂိမ်း၌ ဒေသတွင်း ၁၁ နိုင်ငံစလုံး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။
9:08 PM အထွေထွေ, အနုပညာ No comments
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြင့်ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားလာသည့် AA သောင်းကျန်းသူများ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း စိမ့်ဝင်လှုပ်ရှားလာသည့် AAသောင်းကျန်းသူများအား တပ်မတော်မှ လိုက်လံ ရှင်းလင်း ချေမှုန်းလျက်ရှိပါတယ်။ ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့က ဒေသခံများ၏ သတင်းပေးချက်အရ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းနှင့် AA သောင်းကျန်းသူများထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သောင်းကျန်းသူများထံမှ လက်နက်ခဲယမ်း များ၊ စစ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအပြင် မူးယစ်ဆေးဝါးများလည်း သိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကေအိုင်အေ လက်အောက်မှာနေထိုင်လှုပ်ရှားလာခဲ့တဲ့ AA သောင်းကျန်းသူများဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မငြိမ်းချမ်းအောင် လုပ်ဆောင်ချင်ရုံသာမက ရခိုင်လူငယ်များကိုပါ မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြင့် ဖျက်ဆီးဖို့ ကြံရွယ်လာတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
နီပေါငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေဟာ ၅၀၀၀ အထိ ရှိနိုင်တယ်လို့ ပြည်ထဲရေး ဌာန အကြီးတန်း အရာရှိတယောက်က ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါဟာ ၁၉၃၄ ခုနှစ်က လူ ၈၅၀၀ သေဆုံးခဲ့တဲ့ ငလျင်နောက်ပိုင်း အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဧပြီ ၂၅ ရက်နေ့က ၇ ဒသမ ၉ ရှိတဲ့ ငလျင်လှုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အသေအပျောက်စာရင်းဟာ နာရီနဲ့အမျှ တိုးနေတာ ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့အထိ ၄၀၀ နီးပါး ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ အနည်းဆုံး ၆၅၀၀ လည်း ဒဏ်ရာရထားပါတယ်။
ရုပ်ရှင် အကြိုခံစားခြင်း- Ex Machina
7:30 PM နိုင်ငံတကာသတင်း, အနုပညာ No comments
ထူးထူးဆန်းဆန်း ခေတ်ရှေ့ ပြေး သိပ္ပံဇာတ်လမ်းကြိုက် ပရိ သတ်တွေအတွက် မကြာခင်ကမှ ထွက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားသစ်လေး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကာလက်စမစ်ဟာ နယူး ယောက်အခြေစိုက်နာမည်ကြီးရှာ ဖွေရေးဝက်ဘ်ဆိုက် Bluebook မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ပရိုဂရမ်မာ တစ်ဦးပါ။ ကုမ္ပဏီရဲ့ စီအီးအိုနေ သန်ဘိတ်မန်းရဲ့ တောင်တန်းနား က အိမ်ဂေဟာကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံ ခဲ့ရပြီး နေသန်က သူဖန်တီးထားတဲ့ လူသားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ စက်ရုပ်မ လေး အေဗာကို စမ်းသပ်လေ့လာ ဖို့အတွက် တစ်ပတ်ကြာ ဖိတ်ခေါ် လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်ရဲ့ ‘စာလာလာမဖတ်နဲ့’ဒီဗီဒီ
‘စာလာလာမဖတ်နဲ့’ ဒီဗီဒီထွက်ရှိနိုင်ရန် ၂ နှစ်ခန့်အချိန် ယူခဲ့ရပြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်ချင်းစီကို ဇာတ်ကားတစ်ကားရိုက်ကူးထား သကဲ့သို့ ပုံဖော်ရိုက်ကူးထား ကြောင်း ခွန်းဆင့်နေခြည်က ပြောသည်။
‘‘အော်ဒီယိုနဲ့ အမ်တီဗီက ၂ နှစ်ကျော်လောက်ကွာသွားတယ်။ အချိန်ဟသွားပေမယ့် အကောင်း ဆုံးဖြစ်အောင်တော့ ပုံဖော်ထား နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လည်း သီချင်းအပုဒ်တိုင်းကို အား ရပါတယ်’’ဟု ခွန်းဆင့်နေခြည်က ပြောသည်။
နီပေါငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက် (၃၂၀၀)ကျော်ထိ မြင့်တက်လာ
11:54 PM နိုင်ငံတကာသတင်း No comments
နီပေါနိုင်ငံတွင် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်ကုန်က လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် အင်အားပြင်း ငလျင်ကြီးကြောင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက်သည် (၃၂၀၀)ကျော်ထိ မြင့်တက်လာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဧပြီ ၂၅ ရက်က လှုပ်ခတ်သွားသည့် ရစ်ခ်ျတာစကေး (၇.၈) အဆင့်ရှိ ငလျင်ကြီးကြောင့် တိုက်တာ အဆောက်အအုံများ အက်ကွဲ ပြိုပျက်ခဲ့ပြီး လူအများအပြား သေကြေခဲ့ရာ ဧပြီ ၂၇ ရက် နံနက်ပိုင်းထိ စာရင်းအရ စုစုပေါင်း (၃၂၁၈)ဦးထိ အသေအပျောက် ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တန်ချိန်ထောင်ချီသော မူးယစ်ဆေးဝါးများ “ဖြစ်ရပ်မှန်လား---လုပ်ကြံပြောဆိုမှုလား”
8:51 PM ပြည်တွင်းသတင်း, ဆောင်းပါး No comments
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ လောက်ကိုင်မြို့အား ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူများက စတင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှ ပဋိပက္ခအသွင်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားခဲ့သော်လည်း ကမ္ဘာ့တရားမဝင်ဈေးကွက်များတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများပြတ်လပ်မှုဖြစ်နိုင်သည်ဟု မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ထိုတိုက်ခိုက်မှုများကို နိုင်ငံတကာမီဒီယာများက လုံးဝ မျက်ကွယ်ပြုထားခဲ့ကြပါသည်။
ယနေ့တွင် အင်တာနက်ဝယ်ပြန့်နှံ့နေသည့် ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကို လုံးဝရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း နေထက်လင်းကပြော
ယနေ့တွင် အင်တာနက်ဝယ်ပြန့်နှံ့နေသည့် ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကို လုံးဝရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း နေထက်လင်းကပြောသည်။"ကျွန်တော်ရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖားသည်မသား ဇာတ်ကားပါ။ ဖာသည်မသားဇာတ်ကားမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်တာ ကျွန်တော်ကို မလိုလားတာပဲဖြစ်ဖြစ် စာလုံးပေါင်း မှား ပေါင်း တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီစာကို နားမလည်တာပဲဖြစ်ဖြစ် တင်လိုက်တော့ ပရိသတ်တွေအထင်မြင်လွဲမှားသွားတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ် "ဟု နေထက်လင်းက Popular News သို့ပြောသည်။
အဆိုပါ ဖားသည်မသား ဇာတ်ကားမှာ ၀ဋ်ကြွေးအလှည့်အပြောင်းကိုပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ကူးထားသည့်ဇာတ်ကားဖြစ်သည့်အတွက် နယ်အကြိုက်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်နိုင်ကြောင်းသူကပြောသည်။
"လာအပ်ကတည်းက ထုပ်လုပ်ရေးကို ကျွန်တော်ပြောတယ် နာမည်ဆန်းတာ ဇာတ်ဆန်းတာ ဟုတ်တယ် ဖားမှာ ၀စ္စနှလုံးပေါက် ကျန်ခဲ့ရင် ပြသနာဖြစ်နိုင်တယ်တောင်ပြောလိုက်သေးတယ်။ ကျွန်တော် အဲလိုဇာတ်ကားမျိုး မရိုက်ပါဘူး အခုက အသိပညာပေးတဲ့ သဘောရောက်လို့ရိုက်တာပါ"ဟုနေထက်လင်းကဆိုသည်။
"ယောက်ျားတွေမုန်းတဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ အကျင့်ငါးမျိုး"
မျက်တော်ဖြေ နည်း အသစ်လား The Voice ဆရာများ ခင်ဗျာ..
မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မော်ဝလီ ဆရာကို လက်အုပ်ချီ ကန်တော့တဲ့
ပုံကိုတင်မိတဲ့အတွက် The Voice သတင်းဌာန ဟာ အမည်မသိလူအုပ်ကြီးရဲ့ ငြိုငြင်ခြင်းကို များစွာခံခဲ့ရပါ
တယ်။တကယ်လက်အုပ်ချီ ကန်တော့တာ မှန်ပေမယ့် မိမိမတင်သင့်တာ တင်မိပါတယ်ဆိုပြီး အနူးအညွတ်
တောင်းပန်ပါတယ်တောင် ငါမိုကရေစီ မြတ်နိုးတဲ့အမည်မသိ လူအုပ်ကြီးဟာ မကျေနပ်နိုင်ပဲ The Voice ကိုဆဲလိုဆဲ၊ အယ်ဒီတာချုပ်ကို မေးလ်ပို့၊ ဖုန်းဆက်ဆဲလိုဆဲ၊ နောက်ဆုံး အယ်ဒီတာချုပ်ကို ကျော်မင်းဆွေကိုတောင် The Voice က နှုတ်ထွက်ဖို့အထိ ဖိအားတွေ ပေးလာခဲ့ကြတာကြောင့်၊ The Voice သတင်းဌာနခင်ဗျာ သစ္စာတိုင်ရော ၊ မေတ္တာအခိုင် ပါ တောင်းပန်ပါတယ်။သို့သော်လည်း မရခဲ့ပြန်ပါဘူး။ နောက်ဆုံး ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ ငိုချင်းချပြီး၊ The Voice ဆိုတာ အစိုးရနဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းကိုသာ အများဆုံး ဝေဖန်ပုတ်ခတ်ခဲ့ပြီး အန်တီ(ဒေါ်စု) ကို လက်ရှောင်ခဲ့ပါတယ်၊အခုတစ်ခါလေး အမှားကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ကြတာ မရိုးသားတော့ဘူးလို့ ပြောယူရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုပင် မကျေနပ်ကြသေးတဲ့ ငါမိုကရေစီမြတ်နိုးတဲ့ လူအုပ်ကြီးအတွက်နောက်ထပ် ငါမိုကရေစီ မြတ်နိုးတဲ့လူအုပ်ကြီး အကြိုက်ဖြစ်သော သတင်းထောက် ဆရာနော်ကို ရဲ့ တပ်မတော် ကို တေ့ဖြုတ်တဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ မျက်တော်ဖြေပေး
နီပေါနိုင်ငံတွင် အင်အားအလွန်ပြင်းထန်သော ငလျင်ကြီးလှုပ်ခတ်၊ လူတစ်ထောင်ကျော်သေဆုံး
ဧပြီ ၂၅ ရက်က နီပေါနိုင်ငံတွင် အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် မြို့တော် ခတ္တမန္ဒူ၌ အဆောက်အအုံအပျက်စီးများကြားမှ အမျိုးသားတစ်ဦး လွတ်မြောက်ရန် ဝိုင်းဝန်းကူညီနေကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ − အီးပီအေ)
နီပေါနိုင်ငံတွင် ဧပြီ ၂၅ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီ ၄၀ မိနစ်က အင်အားပြင်းထန်သော ငလျင်ကြီးလှုပ်ခတ်သွားပြီး လူပေါင်း ၁,၄၀၀ ကျော် သေဆုံးကာ နောက်ထပ်လူအများအပြားမှာ အပျက်အစီး များအောက် ပိတ်မိနေ၍ စိုးရိမ် နေကြသည်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံး ပါဝင်သော ညီလာခံကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ဧပြီ နောက်ဆုံးပတ်တွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည့် NCCT အစည်းအဝေး ရွှေ့ဆိုင်း
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်မူကြမ်း လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို မတ် ၃၁ ရက်က တွေ့ရစဉ်
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့(NCCT) ၏ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးနိုင်ဟံသာ၊ ဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(၁) ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၊ ဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (၂) ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်တို့အားလုံး မေ ၁ ရက် မှ ၃ ရက်အထိ ရှမ်းပြည်နယ် ပန်ဆန်းဒေသတွင် “၀” ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ် (UWSA) က ကြီးမှူးကျင်းပသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်၍ NCCT ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေးကျင်းပရေး ကိစ္စ ပန်ဆန်းမြို့၌ပင် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း NCCT အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ဧပြီ ၂၄ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
1:01 AM အထွေထွေ No comments
11:37 PM ဆောင်းပါး No comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ဖို့ စဉ်းစားနေကြောင်း ပြောခဲ့တယ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
အစိုးရနှင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲထားသည့် ရှမ်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS/SSA မှ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် တပ်သားသစ် စုဆောင်းမှုများနှင့် အခွန်ကောက်ခံမှုများ အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်လာနေခြင်းကြောင့် ဒေသခံများ အခက်တွေ့နေကြောင်း ဒေသခံ ပြည်သူများနှင့် ရှမ်းလူမှု့အဖွဲ့စည်းများထံမှာ သိရသည်။
သံလွင်တွေ ရေတွေ ကုန်ပါမှ တွေ့ရမှာလား . . . (ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော ညီငယ်နှစ်ယောက်အား ရည်ညွှန်းရေးသားသည်)
11:58 PM အထွေထွေ No comments
တရုတ်ပြည်နယ်စပ်၊ ကြယ်ဂေါင်နှင့် မြန်မာ ပြည်၏ရှမ်း/မြောက်နယ်နိမိတ်အဆုံး မူဆယ်မြို့ လယ်မှာ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသည်က ရွှေလီမြစ်။ ထိုစဉ်ကရွှေလီမြစ်ကူးတံတားသည် ယခုလို လှပ၊ ခိုင်ခန့်၊ ခန့်ထည်သော တံတားမဟုတ်သေး။ ကွန် ကရစ်သံဘောင်ဖြင့် ဘေလီတံတား၊ သံတံတားပေါ် မှ လမ်းသည်ကျဉ်းမြောင်းလှသည်ဖြစ်၍ ဗမာပြည် မှ အ၀င် တရုတ်ပြည်မှ အထွက်ကားများတစ်လှည့် စီ စောင့် စောင့်နေရသည်။
11:48 PM အနုပညာ, ဆောင်းပါး No comments
အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုပြု ပြင်လို့မရတောင် အိုက်တင်ပု...
မြန်မာနှင့် ယှဉ်ရမည့် အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံ ဘောလု...
အမေရိကန်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ခွန...
နီပေါငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက် (၃၂၀၀)ကျော်ထိ ...
ယနေ့တွင် အင်တာနက်ဝယ်ပြန့်နှံ့နေသည့် ဗီဒီယိုဇာတ်ကား...
နီပေါနိုင်ငံတွင် အင်အားအလွန်ပြင်းထန်သော ငလျင်ကြီးလ...
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံး ပါဝင်သော ညီလာ...
ချစ်သူနှစ်ဦး ဆက်ဆံရေးမှာ နားထောင်တတ်သူကောင်း တစ်ေ...
"တကယ်တော်တဲ့ လူငယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပေါ်ထွန်းစေချင်...
သံလွင်တွေ ရေတွေ ကုန်ပါမှ တွေ့ရမှာလား . . . (ကွယ်လွ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လက်အုပ်ချီဓာတ်ပုံ ဖော်ပြမှု The...
အလားလာမကောင်းနိုင်တဲ့ ရခိုင်သောင်းကျန်းသူ (AA)
လောက်ကိုင်တွင် တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ပြင်းထန်
ဗြိတိန်တွင် ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေး၏ ရင်သားကို ကိုင်...
တပ်မတော်အင်အားရှိမှ အချုပ် အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲမည်
ရွှေမန်းသဘင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် သွားရောက်ဖျော်ဖြေ
ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀မျိုးကို ရရှိဖို့ရာ အမျိုးသာ...
ဖုန်ကြားရှင်ကို အရာသွင်းလို့ နေရာယွင်းလျှင် တပ်မတေ...
သမ္မတအိမ်တော် မဟာသင်္ကြန် အကျနေ့
၆ ပွင့်ဆိုင်နှင့် မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းများ
မျက်နှာသစ်မော်ဒယ် အယ်လ်လစ်ရှား ရဲ့ သင်္ကြန် ဖက်ရှင်
သင်္ကြန်အတွက် ၀တ်စုံ တဒါဇင်လောက် စီစဉ်ထားတယ် ဆိုတဲ့ ...
၅၉ (စ) မပြင်ဆင်ပေးပါက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ အတွ...
ကချင်တိုင်းရင်းသူ မော်ဒယ်ချောလေး ဂျေနော
လိုတာထက်ပို အထီးကျန်မှာ ကြောက်တတ်သူတွေဟာ အချစ်ရေးမ...
သတင်းဂျာနယ်များကို မယုံကြည်ရန် မဘသတရားပွဲတွင် ဦးဝ...
အစီအစဉ်ချမှတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း - ပိုက်တင်
ဧ၀ံမေသုတံ ဧကံ မီဒီယံ
မနှစ်ကသင်္ကြန် အနုပညာရှင်များ၏ ပုံရိပ်များ
တပ်မတော် (ရေ) ၏ စုပေါင်း စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေမှုများ- T...
ဦးပါမောက္ခကို မှုခင်းကိစ္စများတွင် ဝင်မစွက်ဖက်ရန် သံ...
နစ်မြုပ် ရုရှား ငါးဖမ်းသဘောင်္က မြန်မာတဦးနဲ့ ဆက်သွယ...
NLD ပါတီကို ကိုစည်သူမောင် ဘာ့ကြောင့်ဝင်တာလဲ
ရေနီမြို့ SUMEC အထည်ချုပ်စက်ရုံပိုင်ရှင်မှ အလုပ်သမ...
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (သို့မဟုတ်) တာဝန်ခံ ညွှန်ကြားရေးမ...
စိတ်ရှုပ်စရာတွေ လျော့ပါးသွားစေမယ့်အပြင် ကိုယ်ခံအား ...
ဗီဒီယို အကြိုခံစားခြင်း-ကမ်းခြေမှာ တွေ့တဲ့ခရု
ဟောင်ကောင်သူဌေးကြီး လီကာရှင်းရဲ့ မှတ်သားဖွယ် စကား...
မနာလို ဝန်တိုတတ်တဲ့ ခင်ပွန်းဟာ ဇနီးသည်ရဲ့ အင်္ဂါစပ်က...
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း တရားခံပြေး အမှုပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော...
Novotel ဟိုတယ် လုပ်ငန်းရှင် ဦးဇော်ဇော်နှင့် တွေ့ဆံ...
ခြောက်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဧပြီ ၁၀ ရက်...
အရေးပေါ်သွေးလို နေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး...
မိကျောင်းကို တုတ်ဖြင့်ဝင်ရိုက်ပြီး သမီး၏အသက်ကို ကယ...